အိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသောမိန်းကလေးငယ်ကို အိမ်ရှင်လင်မယားမှ ညှင်းပန်း နှိပ်စက် - Cele Platform
အိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသော မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို ဒဏ်ရာများရရှိအောင် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သူ အိမ်ရှင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအား ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က
ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ အိမ်တစ်အိမ်တွင် အိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသော မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို ဒဏ်ရာများရရှိအောင် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သူ အိမ်ရှင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအား ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ကာ အရေးယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက် နေ ရာအိမ်မှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူ ဦးမျိုးတင့်နိုင်သည် ဇွန် ၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန်ခန့်တွင် နေအိမ်၌ရှိနေ စဉ် ၎င်းရပ်ကွက်၊ အေ(၆)လမ်း၊ တိုက်(၁၁)၊ အခန်း (၄၀၂)တွင် နေထိုင်သူ အိမ်ရှင်များမှ အိမ်အကူအမျိုးသမီးအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အကြောင်းကြားပြီးနောက် ဇွန် ၄ ရက် ညနေ ၄နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် အဆိုပါနေအိမ် တိုက်ခန်းသို့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရန်ရှင်း၊ ရာအိမ်မှူးဒေါ်ရီရီချို. ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် အတူ စစ်ဆေးရာ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ထွန်းထွန်း (၃၃)နှစ်နှင့် ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ မမြတ်နိုးသူ ( ၃၂ )နှစ်နှင့် အိမ်အကူ မ—– တို့အား ရဲတပ်ဖွဲ့က တွေ့ရှိရခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ အိမ်အကူမိန်းကလေးအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ သူမတွင် ရင်ဘတ်၊ ကျောကုန်း၊ ၀ဲ/ယာလက်မောင်း၊ ၀ဲ/ယာပေါင်တို့တွင် မီးအပူလောင်ဒဏ်ရာများ ၊ ဦးခေါင်းနှင့် ၀ဲ/ယာခြေထောက်တို့တွင် ဖူးရောင်ဒဏ် ရာများ တွေ့ရှိရသဖြင့် ဒဏ်ရာများနှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းရာ ……အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ကိုထွန်းထွန်းနှင့်ဇနီး တုတ်ဖြင့်ရိုက် မမြတ်နိုးသူတို့နှစ်ဦးမှ မီးပူဖြင့်ကပ်ခြင်း၊ ရေနွေးပူဖြင့် လောင်းခြင်းနှင့်ရိုက်နှက်ခြင်းတို့ကြောင့် ရရှိသောဒဏ်ရာများဖြစ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အိမ်အကူမိန်းကလေးအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူ ကိုထွန်းထွန်းနှင့် မမြတ်နိုးသူတို့နှစ်ဦးကို ဒဂုံမြို့ သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မြို့မရဲစခန်း(ပ)၆၆၀/၂၀၁၇၊ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ၃၂၆/၃၂၅/၁၁၄ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းပြင် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့မရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင် များက မြို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ကလေးသူငယ်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူနိုင်ရေး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့်အပြင် လူကူန်ကူးမှုတားဆီး ကာကွယ်ရေးဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်ငြိစွန်းမှုရှိ/မရှိ အမှတ်(၆) လူကူန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့စုမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့် ညှိစွန်းမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အိမျအကူအဖွဈလုပျကိုငျနသေော မိနျးကလေးငယျတဈဦးကို ဒဏျရာမြားရရှိအောငျ ညှငျးပမျးနှိပျစကျသူ အိမျရှငျ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးအား ရနျကုနျတိုငျးရဲတပျဖှဲ့က ဖမျးဆီးအမှုဖှငျ့ကာ အရေးယူ
ရနျကုနျ ဇှနျ ၅
ရနျကုနျမွို့၊ ဒဂုံမွို့သဈဆိပျကမျးမွို့နယျရှိ အိမျတဈအိမျတှငျ အိမျအကူအဖွဈလုပျကိုငျနသေော မိနျးကလေးငယျတဈဦးကို ဒဏျရာမြားရရှိအောငျ ညှငျးပမျးနှိပျစကျသူ အိမျရှငျ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးအား ရနျကုနျတိုငျးရဲတပျဖှဲ့က ဖမျးဆီးအမှုဖှငျ့ကာ အရေးယူလိုကျပွီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ဒဂုံမွို့သဈ(ဆိပျကမျး)မွို့နယျ၊ (၉၄)ရပျကှကျ နေ ရာအိမျမှူးတာဝနျထမျးဆောငျသူ ဦးမြိုးတငျ့နိုငျသညျ ဇှနျ ၃ ရကျ နံနကျ ၉ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ နအေိမျ၌ရှိနေ စဉျ ၎င်းငျးရပျကှကျ၊ အေ(၆)လမျး၊ တိုကျ(၁၁)၊ အခနျး (၄၀၂)တှငျ နထေိုငျသူ အိမျရှငျမြားမှ အိမျအကူအမြိုးသမီးအား ညှငျးပနျးနှိပျစကျနကွေောငျး သိရှိရသဖွငျ့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးထံ အကွောငျးကွားပွီးနောကျ ဇှနျ ၄ ရကျ ညနေ ၄နာရီခှဲ အခြိနျခနျ့တှငျ အဆိုပါနအေိမျ တိုကျခနျးသို့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးရနျရှငျး၊ ရာအိမျမှူးဒျေါရီရီခြို. ရပျမိရပျဖမြားနှငျ့ အတူ စဈဆေးရာ အိမျရှငျဖွဈသူ ထှနျးထှနျး (၃၃)နှဈနှငျ့ ၎င်းငျး၏ဇနီးဖွဈသူ မမွတျနိုးသူ ( ၃၂ )နှဈနှငျ့ အိမျအကူ မ—– တို့အား ရဲတပျဖှဲ့က တှရှေိ့ရခဲ့ကွောငျး ရနျကုနျတိုငျး ရဲတပျဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျသညျ။
ပူးပေါငျးအဖှဲ့မှ အိမျအကူမိနျးကလေးအား ကွညျ့ရှုစဈဆေးရာ သူမတှငျ ရငျဘတျ၊ ကြောကုနျး၊ ၀ဲ/ယာလကျမောငျး၊ ၀ဲ/ယာပေါငျတို့တှငျ မီးအပူလောငျဒဏျရာမြား ၊ ဦးခေါငျးနှငျ့ ၀ဲ/ယာခွထေောကျတို့တှငျ ဖူးရောငျဒဏျ ရာမြား တှရှေိ့ရသဖွငျ့ ဒဏျရာမြားနှငျ့ပတျသကျ၍မေးမွနျးရာ ……အိမျရှငျဖွဈသူ ကိုထှနျးထှနျးနှငျ့ဇနီး တုတျဖွငျ့ရိုကျ မမွတျနိုးသူတို့နှဈဦးမှ မီးပူဖွငျ့ကပျခွငျး၊ ရနှေေးပူဖွငျ့ လောငျးခွငျးနှငျ့ရိုကျနှကျခွငျးတို့ကွောငျ့ ရရှိသောဒဏျရာမြားဖွဈကွောငျး စိစဈတှရှေိ့ခဲ့ရသညျ။
ယငျးကဲ့သို့ အိမျအကူမိနျးကလေးအား ညှငျးပနျးနှိပျစကျသူ ကိုထှနျးထှနျးနှငျ့ မမွတျနိုးသူတို့နှဈဦးကို ဒဂုံမွို့ သဈ (ဆိပျကမျး)မွို့မရဲစခနျး(ပ)၆၆၀/၂၀၁၇၊ရာဇသတျကွီးပုဒျမ၃၂၆/၃၂၅/၁၁၄ဖွငျ့ အရေးယူဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျးရနျကုနျတိုငျးရဲတပျဖှဲ့ သတငျးထုတျပွနျခကျြတှငျဖျောပွထားသညျ။
၎င်းငျးပွငျ ဒဂုံမွို့သဈ(ဆိပျကမျး)မွို့မရဲစခနျးမှတပျဖှဲ့ဝငျ မြားက မွို့နယျလူမှုဝနျထမျးဦးစီးဌာနသို့ ကလေးသူငယျဥပဒဖွေငျ့ အရေးယူနိုငျရေး ဆကျသှယျဆောငျရှကျ လကျြရှိသညျ့အပွငျ လူကူနျကူးမှုတားဆီး ကာကှယျရေးဥပဒပေါပွဌာနျးခကျြမြားနှငျ့ငွိစှနျးမှုရှိ/မရှိ အမှတျ(၆) လူကူနျကူးမှုတားဆီးနှိမျနငျးရေးရဲတပျဖှဲ့စုမှ ရဲတပျဖှဲ့ ဝငျမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးစဈဆေးဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျးနှငျ့ ဥပဒပေါပွဌာနျးခကျြမြားနှငျ့ ညှိစှနျးမှုရှိပါက သကျဆိုငျရာဥပဒမြေားဖွငျ့ ရဲတပျဖှဲ့က ဆကျလကျအရေးယူဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။